Trump oo dafiray gef ka dhan ah dalalka muhaajiriinta ay ka soo jeedaan - BBC News Somali
Trump oo dafiray gef ka dhan ah dalalka muhaajiriinta ay ka soo jeedaan
12 Jannaayo 2018
Madaxweynaha Maraykanka ayaa beeniyay in uu hadalo gef ah ka sheegay waddamada ay ka yimaadaan dadka muhaajiriinta ah ee soo gala Maraykanka.
Wararka ku saabsan in Trump shir ka dhacay xafiiskiisa Oval uu dalalka ay muhaajiriinta ka yidaamaan ku tilmaamay sida qashin qub oo kale , ayaa waxaa ka dhashay carro balaaran adduunka oo dhan.
Balse Trump ayaa fariin uu kusoo qorey Twitter-ka ayuu sheegay in ereybixinta uu isticmaalay ay ka duwanayd tan ay warbaahinta faafisay.
Wargeysyada Washington Post, New York Times, Politico iyo Wall Street Journal ayaa dhammaantood tabiyay hadalada gefka ah ee Trump, iyaga oo soo xiganayay dadkii ka qeybgalay shirkii uu hadalka ka jeediyay.
Xildhibaanada xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimoqoraadiga ee Aqalka Congress-ka ayaa maalintii khamiista xafiiskiisa ku booqday Trump si ay uga wada hadlaan arrimaha muhaajiriinta, xiligaas oo ahayd markii uu Trump hadalada gefka ah jeediyay.
Dalka Botswana ayaa u yeertay safiirka Maraykanka, iyada oo hadalka madaxweynaha ku tilmaamtay mid aanan loo dulqaadan karin oo qeyru mas'uulnimo ah.
Afhayeenka hay'adda xuquuqda aadanaha ee Qaramada Midoobay Rupert Colville ayaa sheegay in haddii uu run noqdo hadalka Trump uu ka dhiganyahay fadeexad weyn iyo ceeb laga ashqaraaro.
Waxa uu ku tilmaamay in uu hadalkaas ka dhiganyahay midab takoor iyo bahdil weyn.
Trump oo Afrika ku soo kordhiyay "dal cusub"
Muran ka dhashay warqadda caafimaadka ee Trump
Ururka qaran ee dadka midabka ah ee Maraykanka ee NAACP ayaa war saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in Trump uu kusii dhacayo god bakayle oo aad u dheer, kaas oo ah mid nacayb iyo midab takoornimo. Ku salaysan.
Hadalada madaxweynaha waxaa ka mid ahaa kuwa uu u jeediyay dadka ka imanaya dalka Haiti oo uu sheegay in aanan Maraykanka looga baahnayn, islamarkaasna ay tahay in dalka laga tarxiilo.
Gabadha lagu magacaabo Mia Love oo ah xildhibaanad kasoo gasha gobolka Utah oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga, asal ahaana kasoo jeedda dalka Haiti ayaa Trump ka dalabtay in uu raaligalin rasmi ka bixiyo hadalada uu jeediyay.
Todobaadyadii dhawaa, maamulka Trump ayaa isku dayayay in uu xadido tirada xubnaha qoyska ee Maraykanka iman kara si ay ugu soo biiraan xubno kale oo horey Maraykanka ugu noolaa.
Xildhibaanada ayaa soo jeediyay in dadka muhaajiriinta qaarkood oo Maraykanka ku sugan loo ogolaado in ay sii joogaan maadaamaa dalalka ay ka yimaadeen aanan lagu laaban karin xaalado amni awgood.
Si ay u helaan ogolaanshaha madaxweynaha, waxa ay xildhibaanada Trump u ogolaadeen in ay ansixinayaan lacag dhan $1.5 bilyan oo doolar si uu ugu dhiso darbiga xudduuda, balse Trump ayaa sheegay in waxa loosoo bandhigay ay aad uga yaryihiin wixii loo baahnaa.
Trump ayaa soo jeediyay in kaliya Maraykanka laga qaabilo dadka tayada leh ee dalkiisa gaarsiin kara heerka.
Dadka lagala noqday ruqsadaha kumeelgaarka ah waxa ay kasoo kala jeedaan dalalka Haiti, Nicaragua iyo Salvador.
Shan aragti oo Afrika ay ka qabto Trump
Maxay tahay doodda ku saabsan 'caafimaadka maskaxeed' ee Trump
18 Febraayo 2017
Doorashada Trump maxay Afrika uga dhigan tahay?
Mugabe oo markii u horaysay taageeray Trump
Maxaa ka soo bixi kara baaritaanka caafimaadka Trump?
11 Jannaayo 2018
Trump oo kordhinaya kharashka gaashaandhigga